- सक्षम शर्मा
नमस्ते, म सक्षम शर्मा । मेरो घर इटहरी–५ मा पर्छ । म चार वर्षको भएँ । मामाघरनजिकै मेरो स्कुल छ । म त्यहीँ पीजीमा पढ्छु । मेरी दिदी समृद्धि भट्टराईको बालपत्र अस्ति नै पढेँ । मलाई पनि लेख्न मन लाग्यो ।
मैले यस्तो कहिल्यै लेखेको छैन । त्यसैले दिदीकाे जस्ताे राम्राे हुँदैन होला । यो लेख्न मलाई मामुले पनि अलिअलि सिकाउनुभएको हो । दिदीलाई पनि मामुले अलिअलि त सिकाउनुभयो होला नि ! सक्षमलाई भाइटीका लगाइदिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेकी थिइन् । मैले यसपालि समृद्धिसँग नै टीका लगाएँ । खुब रमाइलो भयो । मैले फाेटाे पनि पठाएकाे छु ल !
नाम लेखाएर बोर्डिङ जान थालेको दुई/चार दिन भएको थियो, लकडाउन भइहाल्यो । मलाई त मज्जा आयो । स्कुल बन्द भएपछि मामुले भन्नुभयो, ‘स्कुल जाने बेलामा लडिबडी गर्दै रुन्थिस्, अब त ढुक्क भयो होला नि !'
म हाँसेको थिएँ । मलाई घरमा मामुबाबाको साथमा बस्न नै रमाइलो लाग्छ । लकडाउनभरि मामु र बाबाको साथमा बस्न पाएँ, मामाघरमा बुबाआमा (हजुरबुबा र हजुरआमा), आन्टी र मामाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ । उहाँहरूसँग बस्न पाएँ, आनन्द लाग्यो ।
धन्न म पढ्ने स्कुल मामाघरछेउमै छ, त्यसैले त्यो भुलेको छैन । अरु सबै बिर्सिसकेँ । मामुले भन्नुभएको, म निकै सानो छु रे । सानो भएर पनि होला, मैले बिर्सेको ।
घरमा बसेको बेला टीभी, युट्युब, टिकटक हेरेँ । बाबाले भन्नुभएको, पढेको मान्छे धेरैतिर काम लाग्छ रे । त्यसैले अब स्कुल जाँदा नरुने सोचेको छु । पढेर के बन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । तर, बाबामामुले डाक्टर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । हेरौँ, के हुन्छ पछि ।
अनि समृद्धि, मैले तिमीले लेखेको बालपत्र पढेजस्तै तिमीले पनि मेरो बालपत्र पढिरहेकी छौ भने अर्को भाइटीका पनि मसँगै लगाउनु है ! तिम्रो आफ्नै भाइ भए मलाई पनि टीका लगाइदेऊ है ! मेरो बहिनी भई भने म तिमीसँग पनि टीका लगाउँछु । तिमी पनि मेरी बहिनी नै हौ । म तिमीलाई धेरै माया गर्छु । अब स्कुल पनि लाग्छ रे । स्कुल जानुपर्छ । धेरै पढ्नु छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २०, २०७७, ०९:५७:००